आरजु देउवाको एक फोनले प्रहरीमा हंगामा ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
आरजु देउवाको एक फोनले प्रहरीमा हंगामा !
प्रहरी अधिकारी सत्तासँग कति धेरै नतमस्तक हुन्छन् भन्ने कुरा हालै एक घटनाले देखाएको छ । कर्तव्य ज्यान जस्तो मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक दबाबको भरमा छाड्ने तयारी भइरहेको छ ।
पक्राउ परेका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवा निकट कांग्रेस नेता भएको खुलेपछि प्रहरीमा हंगामा मच्चिएको हो । जसकारण प्रहरीले घटना गोप्य राखेको छ ।
२०६८ सालको चैत ५ गते काठमाडौको सरस्वतीनगरमा कैलालीकी मेघी चौधरीको रहस्यमय मृत्यु भयो । आगोमा जलेर उनको मृत्यु भएको थियो । घटना आत्महत्या जस्तो देखिएपनि परिवारलाई विश्वास लागेन । हत्या भएको हुनसक्ने आधार भए पनि त्यतिबेला प्रहरीले गम्भीरता देखाएन ।
गरिब परिवारकी कमलरी चौधरी घरेलु कामदारका रुपमा शान्तिनगरस्थित बालकृष्ण शाहको घरमा काम गर्दथिन् । त्यहाँ उनलाई चरम शोषण गरिएको थियो । जुन उनले परिवारलाई लेखेको पत्रमा पनि उल्लेख छ । मृत्युको कारण अस्पष्ट छ । यदी आत्महत्या नै थियो भने कारण पोष्टमार्टममा नखुल्नु अचम्म छ ।
प्रहरीले सोही घटनामा संलग्नताको आरोपमा बालकृष्ण शाह र रामबहादुर केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । हाल उनीहरु बानेश्वर वृत्तको थुनामा छन् । सामान्य चेक बाउन्सका अभियुक्त पक्राउ गर्दा समेत प्रेस बिज्ञप्ती निकाल्ने प्रहरीले यो घटनालाई भने गोप्य राखेको छ ।
किनकि, पक्राउ परेका रामबहादुर केसी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुका निकट व्यक्ति हुन् । उनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । आरजुको निर्वाचन क्षेत्र कैलालीका नेता भएकालाई उनलाई छाड्न प्रहरीमाथि दबाब परेको छ । जसकारण प्रहरीले यो घटनालाई गोप्य राखी उनीहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
मृतकको परिवारले १० वर्षअघि नै केसी र शाहविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी परेलगत्तै उनीहरु भागेका थिए । पछि प्रहरी यसमा चासो दिएन । हालै पुराना मुद्दामा अभियुक्त खोज्ने क्रममा उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । तर, आरजुको फोनले प्रहरीका हाकिमहरु डराएका छन् । यो घटनाले प्रहरी अनुसन्धानमा कुन तहको दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । साथै कमलरीको हत्या जस्तो घटना जस्तो अभियुक्त छाड्न बालुवाटारबाटै भएको चलखेल झनै डरलाग्दो छ ।